Ntucha Stanolone (521-18-6) hplc ma98% | AASraw Nandrolone ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ihe nkuzi / Stanolone ntụ ntụ
SKU: 521-18-6. Category: Ihe nkuzi
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Stanolone ntụ (521-18-6), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Stanolone ntụ ntụ bụ nke siri ike na androgen karịa testosterone - ọ na-ejikọta 3-5 ugboro ugboro karị na onye na-anabata androgen. Ọ bụrụ na ị wepụrụ 5 AR site na akpụkpọ anụ ndị a ma gbochie nhazi DHT, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ mgbanwe dị egwu na physiology.
Stanolone ntụ ntụ video
Stanolone ntụ ntụ isi Characters
aha: Stanolone ntụ ntụ
Melt Point: 178-183 ° C
Stanolone ntụ ntụ ojiji na usoro steroid
Stanolone ntụ ntụ na-ezo dị ka androStanolone raw ntụ ntụ, Dihydrotestosterone, DHT.
Stanolone ntụ ntụ Usage
Ụdị: 40mg kwa ụbọchị.
Ịdọ aka ná ntị na Stanolone ntụ ntụ
Maka ngwa ngwa ngwa ngwa nke ike na ike muscle Stanolone ntụ ntụ bụ obere uru. AndroStanolone raw ntụ ntụ ji bụrụ onye na-asọ asọ asọmpi kachasị mmasị nke onye na-eme egwuregwu ka ọ na-enyere aka nweta ahụ ike karịa site na ụba abụba site na ịba ụba etrogen na-enweghị aromatizing. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji AndroStanolone ntụ ntụ n'oge nrụgide maka nkwụsị nke doping a nwalere ebe ọ bụ na ihe ahụ na-anọgide n'ime ahụ maka nanị oge dị mkpirikpi na testosterone / epitestosterone uru adịghị emetụta.
Stanolone ntụ ntụ yiri otu dihydrotestosterone nke ahụ, nke, dị ka anyị si mara, na-akpụpụta site na ntọghata akụkụ nke testosterone. Ụfọdụ na-akpọ AndroStanolone raw ntụ ntụ a sịntetik dihydrotestosterone. AndroStanolone ntụ ntụ nwere mmetụta na-emekarị etrogenic na, n'ihi usoro ya, enweghị ike ịtụgharị n'ime estrogen.
Uzo ozo di nma bu na onodu ajuju abughi imeju. Taa, Otú ọ dị, taa, AndroStanolone raw ntụ ntụ adịghị eji ndị na-eme egwuregwu eme ihe. Otu ihe kpatara nke a bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ogige ndị Europe na ndị America anaghịzi enwe ego. Ihe ọzọ kpatara ya bụ na ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-eji Masteron nwere ngwa ngwa. Ma AndroStanolone raw ntụ ntụ nke mbụ ma ọ bụ nke adịgboroja dị n'ahịa ojii.
Stanolone raw ntụ ntụ
Stanolone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Stanolone ntụ ntụ si AASraw
Stanolone raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka:
1 nyochaa maka Stanolone ntụ ntụ
Stanolone ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi